Göteborg: Iskuul Soomaaliyeed oo si weyn loo dhaliilay | Somaliska
Iskuulka lagu magacaabo Römosseskolan ee ku yaala magaalada Göteborg oo uu maamule ka ahaan jiray mudanaha Soomaaliga ah ee hada baarlamaanka ku jira CabdriRisaaq Waaberi ayaa dhaliilo aad qatar u ah loo soo jeediyay.
Iskuulka ayaa lagu eedeeyay in ardada aan si isku mid ah dhibcaha loo siin oo macalimiintu ay muhiimada siiyaan wiilasha. Waxaa sidoo kale eedeynta oo ay soo bandhigtay waaxda la socodka iskuulkada (Skolinspektionen) lagu sheegay in macalimiintu ay ardada gacanta u qaadaan.
Waxyaabaha kale ee lagu eedeeyay iskuulka ayaa waxaa ku jira liis dheer oo ay ka mid yihiin
1. Gabdhaha oo lagu xadgudbo. Waxaa lagu sheegay warbixinta in casharada diinta gabdhaha lagu qasbo in ay cadeeyaan in ay caado qabaan iyo in kale si aysan quraanka u akhrin taasoo ay ogaanayaan ardada kale iyo macalimiinta.
2. Ardada oo lagu qasbo carabiga. Waxaa lagu sheegay warbixinta in ardada aysan luuqadooda ahayn Carabiga lagu qasbo in ay qaataan casharada luuqada carabiga.
3. Xoriyada diinta oo lagu xadgudbo. Warbixinta waxaa lagu sheegay in ardada lagu qasbo salaada iyadoo aysan qaar badan dooneyn in ay tukadaan.
4. Waxbarashada oo liidata. Ardada inta badan waxbarashadooda waa hooseysaa, oo xitaa kuwa ugu fiican dugsiyada kale lama qabsan karaan.
5. Dagaal. Waxaa la sheegay in dagaal ardada dhexdooda ah uu iskuulka markasta ka dhaco.
6. Isdhexgal la,aan. Ardada waxaa la sheegay in la baro dhaqanka Islaamka, carabta iyo Soomaalida oo aysan ka shaqeysan bulshada Swedishka.
7. Macalimiinta oo ardada dila. Qaasatan macalimiinta carabta iyo Soomaalida.
Eeedeymahaan ayaa ah kuwa qatar ah oo sumcad xumo weyn ku ah Iskuulka iyo Xildhibaanka. C/risaaq Waaberi ayaa idaacada EKOT u sheegay in uusan warbixinta akhrisan balse uusan hada muhiimad siin arimahaan maadaama uu baarlamaanka ku biiray.
Runtii waa Arin Murugo leh ::
Balse dhanka kale haddii aan milicsano waxaan ra’yi ahaan u arkaa in ay tahay Maja xaabin iskoolada Gaarka loo leeya siiba kuwa Muslimiinta EED loo raadinaa .
Waa sidaan u arka e, wax walba oo suuqa laga saaraana wadamadaan waxaa caado u ah in eed dusha laga saaro.
Tusaalana waxaan u soo qaadan karnaa dhacdooyin badan oo dhacay haba ugu danabyse , middii Maamulihii webka WIKILEKIS ee fakiyay SIRAHA badan , ee Dawlada sweden ugu soo eedayse KUFSI GABDHEED!!
Balse Jimcaale , soo lama dhihi KARO WAA eedayn Qar ka tuura oo lagu doonaa in Dugsida Soomaalida ama Muslimiinta suuqa waxbarashada looga saaro ?
Ileen waxaa caado ka ah wadamadaan wixii suuqa laga saari rabo dhaeecayn ayaa la saaraaye , makula tahay sidaa in ay macquul tahay ?
shiikh mustafa says:
waxan kushegaya niinka qoora wabseedakan hada meel garii wayday oo ad turjuban dhafiiwayday daadka madaxda wax hakashegiin xiil dhiibanka waa niin muslima oo somaliya wana niin ad shaf u leeh war ka beenta ah oo ad kaqooraysiid hadaa wadoo ada kudaalaya mana ahan miid laguugu dhafatyo waxa kashaqaysana waa wax ad uxuun waxaa qoorta been anshax xuuma waxana tahay niinki uguu horeeyay oo daadka somalida benta kashegay oo yirii daadka laga ganacdada deeg deg bana jawaab noga heelaysa hadanahay shacabka somaliyeed oo xalasha
Isdaji waa Ramadaane. Anigu warkaan ma qorin ee waxaa qoray wargeysyada ugu weyn Sweden. Halkaan ka akhriso iyada oo Swedish ah.
Iyaga u hanjab iyaga ayaa kaa mudane.
August 8, 2011 at 23:03
wax kk adheh sheeeekh musdafe wax kan ninka waa murjumeee hais walin mida kale waa wax xun in tasas dhan naloo daba galo,
Ramadaan kariim marka hore salama calaykum marka xiga waxaan odhan lahaa arintaasi waxa weeyaan arin loola dan leeyahay islaamka in lagu dhaqmo ilaahay ayaana ina faray in aanay inantu taaban kitabka iyada oo aan dahir ahayn markaa
isku soo duuboo waxaan u arkaa arin loola jeedo islaamka ee maaha waxbarasho wabilaahi tawfiiq.
ASC waxaan leeyahay walaalkeeyna shiiq mustafa waa bil ramadaan ee ilaah ha laga baqo mida kale walaalkeeyn jimcaale asna waa nin qoraa ah oo wax ka qora wax yaabaha warbaahinta caalamka anga wax nooga qoraan luqadahooda asigoo noo fududeeyo si wax yaabaha nagula dhaliilayo ama wax nalooga sheegayo marka wax uu asuga qoray maahinee waa wax uu noogu fududeeyay luqadeeyna hooyo marka shiikhunaa mustafe ilaah ka baq oo ka laabo ninkaa walaalkaa ah oo u han jabtee kana raali gali marka horane hala sabro waxna hala hubsada ayaan leeyahay walaalaha muslimka ahoow dhamaan waadna mahadsan tihiin asc
ASC, salaan ka dib waxaan aaminsanahy in arimahaan ay yihiin kuwa dacaayad ah oo ay wadaan kooxaha xagjirka cunsuriyiinta ah ee uu hogaamiyo xisbigaan SD la yiraahdo ee Åkesson hogaamiyo , marka warkaas ka baxa ee ilaah talad asaarta waxii dhib wadan ailaah ha naga qabto, ayaga tooda uma jeedaan ee teena ayay raadiyaan waxa aan jirin.